कांग्रेससँग माओवादी–एकीकृत समाजवादी सशंकित- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
कांग्रेससँग माओवादी–एकीकृत समाजवादी सशंकित
कांग्रेसका स्थानीय नेता–कार्यकर्ताले बागी उम्मेदवारी दिएर अन्य दललाई सहयोग गरिरहेको गुनासो
वैशाख २७, २०७९ बबिता शर्मा
काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनले विभिन्न पालिकामा तालमेल गर्दै साझा उम्मेदवारी दिए पनि कांग्रेसको पूरै मत आफ्ना उम्मेदवारलाई आउनेमा सहयात्री दल माओवादी र एकीकृत समाजवादी ढुक्क देखिएका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय निर्वाचनपछि गठबन्धन टुट्ने दाबी गरिरहेकाले पनि सत्तारूढ दलहरू आपसमा सशंकित देखिएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार कैलालीको कैलारी गाउँपालिकामा आयोजित चुनावी सभामा स्थानीय प्रसंग उठाएर कांग्रेसका तर्फबाट अपेक्षाकृत सहयोग नभएको संकेत गरेका छन् । ‘गठबन्धन अझै प्रस्ट भएको देखिनँ । यहाँ (कैलारी गाउँपालिका) का हाम्रो पार्टीका उम्मेदवारलाई जुनसुकै रूपमा भए पनि जिताउन अपिल गर्न चाहन्छु,’ दाहालले भनेका छन्, ‘यहाँ कांग्रेसको कसैले उम्मेदवारी दिएको छ, यो खारेज नहुने हो भने हामी एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ । हाम्राविरुद्ध कुनै खालका धोका, बेइमानी र षड्यन्त्र स्वीकार्य छैन ।’ गठबन्धनबीच भागबन्डा हुँदा उक्त गाउँपालिका अध्यक्ष माओवादी र उपाध्यक्ष कांग्रेसको भागमा परेको थियो । सहमतिविपरीत कांग्रेसबाट अध्यक्षमा उम्मेदवारी परेपछि माओवादीले उपाध्यक्षमा पनि उम्मेदवारी दिएको छ ।
संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा तथा मुलुकमा विकास र सुशासनका लागि पाँच दलीय गठबन्धन बनेको नेताहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । तर स्थानीय निर्वाचनमा देशभर तालमेल गर्ने उनीहरूको प्रयास सफल भएन । तालमेल गरिएका कतिपय पालिकामा पनि माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको भागमा परेको सिटमा कांग्रेसबाटै बागी उम्मेदवारी परेको छ । यसले सहयात्री दलका नेता असन्तुष्ट छन् । खास गरी कांग्रेसको संस्थापन पक्षले तालमेलको भावनाअनुसार आपसी सहयोगका लागि कोसिस गरे पनि शेखर कोइराला पक्षले असहयोग रहेको गठबन्धनका अन्य दलका शीर्ष नेताहरूको बुझाइ छ । ‘कांग्रेसमा संस्थापनको कुरा मानेर हिँड्ने र नमान्ने पनि हुन्छ । यो पुरानै चरित्र हो,’ माओवादी नेता गणेश साहले भने, ‘अहिले म मधेस प्रदेशमा छु । यहाँ शेखरजीहरूको विरोध त छैन तर असहयोग देखिन्छ । त्यसले केही ठाउँमा भोटको मात्रा कम होला तर समग्रमा कांग्रेसकै मत तल झार्दिन सक्छ ।’
कांग्रेसका स्थानीय नेता–कार्यकर्ताले तालमेलको मर्मविपरीत बागी उम्मेदवारी दिएर अन्य दलका उम्मेदवारलाई सहयोग गरिरहेको पनि गठबन्धन दलका नेताहरूको गुनासो छ । पाँच दलीय गठबन्धनको आइतबार पोखरामा आयोजित चुनावी सभामा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कांग्रेसको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । ओलीले प्रधानमन्त्री पद गुमाएको उदाहरण दिँदै उनले दम्भ राख्ने दल र नेताको भविष्य नहुने भएकाले कांग्रेसलाई इमानदारी देखाउन आग्रह गरेका थिए । ‘धेरै दम्भी हुँदा ओलीले प्रधानमन्त्री गुमाए । हामीले पनि दम्भ पाले त्यस्तै नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ,’ नेपालको भनाइ थियो, ‘कहिलेकाहीं कांग्रेसमा दम्भ देखिन्छ । दम्भ पाले केपीकै हालत हुन्छ । ठूलो सानो नभनौं र सबैको अस्तित्व स्विकारौं ।’ सभामा माओवादी अध्यक्ष दाहालले ओलीको अभिव्यक्ति र कांग्रेसको असन्तुष्ट समूहतर्फ लक्ष्य गर्दै भनेका थिए, ‘गठबन्धन टुटाउने प्रयास र षड्यन्त्र चलिरहेको छ ।’
कांग्रेसका संस्थापन पक्षका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवालाई असफल पार्न नेता कोइराला र महामन्त्री गगन थापा गठबन्धनबीच भएको तालमेलअनुसार चुनावी अभियानमा जोडिएका छैनन् । ‘शेखर र गगनजीलाई अहिलेको गठबन्धन मन परेको छैन । शेखरजीलाई पार्टी सभापतिमा हारेको बदला लिन मन छ । गगनजीले पार्टी हित होइन आफ्नो हित हेरिरहनुभएको छ,’ ती नेताले भने, ‘यसले सहयात्री दलहरूमा आंशका हुनु स्वभाविक हो । तर सभापतिले आफ्नोतर्फबाट पुरै कोसिस गर्नुभएको छ । गठबन्धनका उम्मेदवारले नै जित्छन् ।’
भरतपुर, काठमाडौं, पोखरा र धनगढीमा भएका पाँच दलीय गठबन्धनका संयुक्त चुनावी सभामा कोइराला पक्ष सहभागी भएको छैन । भरतपुरमा बिहीबार भएको सभामा कांग्रेस नेता कोइराला, महामन्त्री थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहभागी हुने भनिए पनि अन्तिम समयमा उनीहरू गएनन् । शुक्रबार काठमाडौंमा भएको सभामा पनि थापा सहभागी थिएनन् । महामन्त्री थापा काठमाडौं महानगरको चुनावमा केन्द्रित छन् ।
आफूनिकट नागेश कोइराला विराटनगर महानगरमा मेयरका उम्मेदवार रहेको भन्दै शेखर कोइराला उहीं बसेर सक्रिय छन् । नेता कोइराला र थापाले माओवादीले मेयर पाएको भरतपुर र एकीकृत समाजवादीले मेयर पाएको पोखरा महानगरपालिकामा असहयोग गरे त्यसले प्रभाव विराटनगरमा पर्न सक्ने गठबन्धनमा रहेका नेता बताउँछन् । ‘उहाँहरू (कोइराला पक्ष) ले अन्यत्र असहयोग गर्नुभयो भने विराटनगरका उम्मेदवारलाई असहयोग हुन सक्छ,’ एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर त्यस्तो नहोला, सबैतिर सहयोग आदानप्रदान हुन्छ होला ।’
कांग्रेसमा कोइराला पक्ष सुरुदेखि गठबन्धनको विपक्षमा थियो । उक्त पक्षको भूमिकाबारे कांग्रेस संस्थापन पक्षीय एक नेताले भने, ‘उहाँहरू एमसीसीमा गठबन्धन तोड्न लाग्नुभयो, नसकेपछि चुनावमा दाउ खेल्दै हुनुहुन्छ । बालकोट र उहाँहरूको चासो मिलेको छ, यो संयोग हो वा योजना, पछि खुल्ला ।’
सहमति भएका ठाउँमा कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी दिएका नेतामाथि पार्टीले कारबाही नगर्दा शंका उत्पन्न भएको एक नेताले बताए । ‘गठबन्धनको निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति बैठकले बागीलाई सम्बन्धित पार्टीले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेसले कारबाही गरेको छैन । त्यसले पनि आशंका थपिएको हो,’ उनले भने । जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूको इमानदारी र नैतिकता परीक्षण हुने बताउँछन् । ‘हामीले इमानदारीपूर्वक एक–अर्कालाई सहयोग गरेर निर्वाचन जित्नुपर्छ । जनमोर्चा इमानदार छ, अरूबाट पनि त्यस्तै अपेक्षा गर्छ,’ उनले भने ।
आफ्नो पार्टीका मतदाताप्रति अविश्वास उत्पन्न भएका बेला सोमबार धनगढीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बागी उम्मेदवारले अपिलमार्फत उम्मेदवारी नत्यागे पार्टीले कारबाही गर्ने बताएका छन् ।
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले चैत १५ मा आवश्यकताका आधारमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेसको सोही निर्णयअनुसार ६ महानगर र ११ उपमहानगरको केन्द्रबाट तालमेल गरिएको थियो । अन्यमा जिल्ला तहबाट देशव्यापी प्रयास भए पनि २ सय ९ पालिकामा मात्रै ‘सेट’ मा तालमेल भएको छ । एकतिहाइभन्दा पनि कम अर्थात् २८ प्रतिशतमा मात्रै तालमेल सम्भव भएको हो । सेट तालमेल भएकामध्ये कांग्रेसले १ सय ३४, माओवादीले ४९, एकीकृत समाजवादीले १८, जसपाले ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ४ पालिकामा प्रमुख/अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् । तिनैमध्ये केहीमा बागी उम्मेदवारी परेकामा न्यून मात्रै पछि हटेका छन् ।
प्रकाशित : वैशाख २७, २०७९ ०७:१५
गठबन्धनको डर, ज्योतिषीको भर
वैशाख २६, २०७९ बबिता शर्मा
काठमाडौँ — किसानका लागि असार १५ विशिष्ट दिन हो, तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असार १७ प्रति कौतूहल बढाइदिएका छन् । ओलीले दाबी गरेजस्तै असार १७ वा आसपासमा नेपालको राजनीतिमा ‘उलटफेर’ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रस्ट छैन, तर उनको भविष्यवाणीले राजनीतिक वृत्तमा तरंग भने ल्याएको छ ।
शनिबार विराटगरमा आयोजित चुनाव सभालाई सम्बोधन गरेयता ओलीले यो प्रसंग पटक–पटक दोहोर्‍याएका छन् । विराटगरमा उनको भनाइ थियो, ‘प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाजी ज्योतिषीमा असाध्यै विश्वास गर्नुहुन्छ । त्यसैले जेठको महिना कस्तो छ, असारको महिना कस्तो छ ? मैले दिन नै तोकिदिएको छु– असार १७, कस्ता कस्ता ग्रह, दशा, नक्षत्रहरू कहाँ छन्, एकपल्ट ज्योतिषीलाई बोलाएर हेर्न लगाउनुस् भनेर मैले भनेको छु ।’
आइतबार एमाले मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि यही विषयमा प्रश्न र प्रतिप्रश्न चलिरहे । पत्रकारहरूको प्रश्न थियो– असार १७ मा के हुन्छ ? उस्तै आशयका प्रश्नहरूमा ओलीको एकमुष्ट जवाफ थियो, ‘मैले ज्योतिषीको कुरा भनेको हुँ । एउटा ग्रहदशा हेर्ने र अर्को राजनीति हेर्ने ज्योतिषी हुन्छन् । अहिलेचाहिँ दुवै प्रकारका ज्योतिषीहरू गठबन्धनका अगाडि महासंकट उत्पन्न हुँदै छ भन्छन् । यो ज्योतिषीहरूको कुरा हो । होइन भने ठ्याक्कै–ठ्याक्कै मिलाउने प्रधानमन्त्रीज्यूका आफ्नै ज्योतिषी छन्, बोलाएर सोध्नुभए हुन्छ । मैले त्यही भनेको हुँ ।’
विषयलाई अझ प्रस्ट पार्न भन्दै ओलीलाई प्रतिप्रश्न पनि सोधिएको थियो, तर जवाफ थियो, ‘ज्योतिषीलाई सोध्नुस् न स्पष्ट पार्छन्, ज्योतिषीहरूले भनिराखेका छन् ।’ त्यसपछि तेस्रो प्रश्न उठ्यो– ‘पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले दिनै तोकेर भनेपछि केही न केही त होला ?’ ओलीले फेरि भने, ‘ज्योतिषीहरूले भनिराखेका छन् ।’
ओलीले गठबन्धनका लागि सबैभन्दा ठूलो खड्गो वैशाख ३० मा नै रहेको बताएका छन् । चुनावमा तालमेल प्रभावकारी नहुने र हार भएपछि गठबन्धनभित्र अविश्वास पैदा हुने उनको दाबी छ । ‘ज्योतिषीहरूको भनाइमा गठबन्धनका लागि सबभन्दा ठूलो खड्गो त यही वैशाख ३० नै हो । यसैमा गठबन्धनलाई साह्रै ठूलो मर्का पर्नेवाला छ । कस्तो दिन छानेर राख्नुभएछ ! वैशाख ३० मा त उहाँहरूलाई हुनसम्म हुन्छ क्या π ढाडै भाँचिने गरी,’ ओलीले भने ।
स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आकलन मात्र होइन, ग्रह र ज्योतिषीका आधारमा ओलीको भनाइ अर्थपूर्ण रहेको उनी निकटस्थहरूको दाबी छ ।
‘पहिलो त राजनीतिक विषय हो, गठबन्धन अहिले जसरी बनेको छ, त्यसको हावा चुनावमा फुस्किनेवाला छ, किनकि चुनाव परिणामले उनीहरू पराजित हुनेछन् र एकअर्कालाई दोष लगाएर लाखापाखा लाग्नेछन् । त्यसमा शंका छैन,’ ओलीनिकट एक नेताले कान्तिपुरसँग भने ।
राजनीतिक मात्र होइन, ग्रह, दशा र नक्षत्रका आधारमा पनि ओलीको भनाइमा ‘दम’ रहेको उनीनिकट एक ज्योतिषीको दाबी छ । ‘धेरैजसो नेताहरू ज्योतिष शास्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यसमध्ये ओली पनि एक हुनुहुन्छ,’ भन्छन्, ‘केपी ओलीका पिताजी नै ज्योतिष हुनुहुन्छ, उहाँ तान्त्रिक पनि हो । त्यस्तै अरू ज्योतिषप्रति पनि ओलीको सम्मान र विश्वास छ ।’ उनका अनुसार ज्योतिषीले गरेको भविष्यवाणीका आधारमा ओली विश्वस्त भएका हुन् ।
असारदेखि त्यसमा पनि १७ गतेदेखि ओलीका दिन सहज र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका दिन कठिन हुने योग रहेको उनको दाबी छ । ओलीलाई ज्योतिषीहरूले दिएको सल्लाह प्रस्ट पार्दै उनले भने, ‘खड्ग ओलीको मकर राशि हो, असार १७ गते द्वितिया तिथिदेखि मकर राशिको अष्टम नक्षत्रमा शनि र दशम् नक्षत्रमा बृहस्पतिको दृष्टि पर्नेछ । यो अवस्थामा कुटिल राजनीति चामत्कारिक रूपमा सफल हुनेछ । तर कुम्भ राशिका शेरबहादुर देउवाका राहु र बृहस्पति जुट्ने भएकाले गुरुचण्डाल योग सुरु हुनेछ । अहिले उहाँले गुरु थापेकाहरूले नै साथ छाडेर जानेछन् भन्नेमा ओली विश्वस्त हुनुहुन्छ ।’
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरू भने ओलीको अभिव्यक्ति निर्वाचन प्रभावित पार्ने दाउपेचका रूपमा आएको टिप्पणी गर्छन् । ‘उहाँ (ओली) ले मनोवैज्ञानिक प्रभाव दिन खोज्नुभएको होला । त्यसको कुनै आधार र अर्थ छैन,’ कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘उहाँ त्यस्ता फन्डा गरिरहनुहुन्छ । गठबन्धन राम्रोसँग गइराखेको छ । कुनै समस्या आउला जस्तो मैले ठानेको छैन ।’ आफ्ना एजेन्डाभन्दा विपक्षीलाई गाली गर्न र ‘राजनीतिक आतंक’ सिर्जना गरेर निर्वाचनमा ओली हावी हुन खोजेको उनको आरोप छ ।
एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले त ओलीको अभिव्यक्तिप्रति कडा टिप्पणी गरे । ‘यस्तो कुनै पनि भविष्यवाणी कसैले पनि दिन तोकेर भन्न सक्दैन । ज्योतिषीहरू कहिलेकाहीँ भविष्यवाणी गर्न सक्छन्, ती कुराहरू पनि सबै पुग्दैनन् । तर खड्ग ओली जे कुरा गर्दै छन्, यो किसिमको अराजनीतिक मजाक हो,’ खनालले भने ।
माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले ओलीको चुनावी फन्डा मात्रै भएको टिप्पणी गरे । ‘आफ्नै भविष्य थाहा नपाउने ओलीजस्ता ज्योतिषीले अरूको भविष्य कसरी थाहा पाउँछन् ? राजनीतिक दलले निर्वाचनमा आफ्नो कार्यक्रम जनतामा दिने हो, अरूको खोइरो खनेर उट्पट्याङ कुरा गरेर जनताका निम्ति जोकर मात्रै बन्ने हो,’ पोखरेलले भने, ‘सुन्नेहरू हाँस्छन्, ताली बजाउँछन्, रमाइलो गर्छन् । तर राजनीतिक नेताको काम त्यो होइन ।’
प्रकाशित : वैशाख २६, २०७९ ०६:४२